कुनै समय हामी एक थियौ! पछि ख’राब पात्रलाई शा’शन सत्तामा पु’र्‍याउनु हाम्रो भूल भयो।झाक्री:: Mero Desh
कुनै समय हामी एक थियौ! पछि ख’राब पात्रलाई शा’शन सत्तामा पु’र्‍याउनु हाम्रो भूल भयो।झाक्री
Published on: १ असार २०७८, मंगलवार ११:२५
केही समय थियो सांसद नेत्र झाक्री भने पछि राजनीति देखि लिएर सामाजिक संजालमा निकै चर्चामा रहेको उनी पछिल्लो समय उनको पाटी प्रतीको तर्क र भनाइ हरुलाई जनता हरुले प्राय नकारात्मक लिने गरेका छन!त्यस्तै उन को टिप्पणी पनि पहिला भन्दा फरक तर्क हरु गरेको देख्न सकिन्छ! भर्खर उनको टिप्पणी अनुसार पाटी प्रती निकै दुख व्यस्त गरेको बुझिन्छ !
कुनै समय थियो, आ’न्दोलनको हर मोर्चामा हामी सँगसँगै थियौँ। सपना थियो, एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था जहाँ सरकार जनताप्रति सधै ज’वाफदेही होस्। व्य’वस्था प’रि वर्तन पछि ख’राब पात्रलाई शाशन सत्तामा पु’र्‍याउनु हाम्रो भूल भयो। कुनै समय हामी एक थियौ! पछि ख’राब पात्र लाई शा’शन सत्तामा पु’र्‍याउनु हाम्रो भूल भयो।झाक्री
यो पनि:काठमाडौं । पूर्व विद्यार्थी नेतृ एवं नेकपा (एमाले) बाट निश्काषित सांसद रामकुमारी झाँक्रीले आफु कुनै पनि हालतमा केपी ओलीका पक्षमा नजाने स्पष्ट पार्नुभएको छ प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूलाई पार्टीबाट निकाल्दा कुनै असर नपरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
एक निजी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।उहाँले अध्यक्ष ओलीमाथि गद्दारी र घात गरेको गम्भीर आरोप पनि लगाउनु भएको छ । नेतृ झाँक्रीले आफूहरु ओलीको प्र’वृत्तिविरुद्ध अन्तिम दम रहुञ्जेलसम्म लड्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सकेसम्म एमालेभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने पनि बताउनु भयो । अब एमालेभित्र एकताको लागि आफूहरुले पनि शर्त राखेको जनाउनुभयो ।संसद् विघटन गरेको कुरा गलत भयो भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ ।